Ipa kubata kweutsva pamwe nehunyanzvi kune yako Apple Tarisa | Ndinobva mac
Ipa kubata kweutsva uye runako kune yako Apple Watch
Mwedzi wakasarudzwa nevanhu vazhinji kuti vatange zororo ravo wasvika uye humbowo hweichi ndechekuti isu tinoona mazana ezviuru emota mumigwagwa. Kana iwe uri mumwe wavo uye watora yako Apple Watch kuti utarise «palmito», nhasi tinokuratidza tambo yakagadzirwa mumumvuri miviri ye fluoroelastomer Iine dhizaini yakafanana chaizvo neyatinogona kuona mune yepamutemo tambo iyo Apple yakagadzirirwa iyo Apple Watch Nike +.
Hapana mubvunzo kuti yakanaka sarudzo uye ndeyekuti isu hatifanirwe kungotarisa iyo dhizaini pachayo, asi zvakare fara yakatemwa nguva dhisikaundi inopfuura 50%.
Kana iwe uchida zvisungo zveyako Apple Watch uye iwe uri kugara uchichinja ivo, iwe uchada tambo yandinokuratidza mumifananidzo yechinyorwa. Iyo tambo yakagadzirwa ne fluoroelastomer mumaviri shades eruvara. Ivo vanongowanikwa chete yeiyo 42mm Apple Watch, saka kana iwe uine 38mm imwe ruzivo urwu harusi rwako.
Sezvauri kuona pawebhu izvo zvatinobatanidza nazvo, pane maviri akasiyana mabatanidzwa. Isu tine imwe nhema ne grey uye imwe mutema ine fluorescent green. Aya matoni maviri anosangana zvakakwana muzvikamu zviviri, imwe kumeso kwemukati kwetambo, iyo inobuda nepakati pemaburi sekunge neApple Watch Nike + tambo uye imwe kudivi rinoonekwa, rinova iro dema.
Musiyano weiyi tambo modhi zvine chekuita neNike + ndeyekuti kuvharwa kwacho ndekwekare, ichipa chimiro chepamutemo pamwe nemitambo. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve tambo idzi, shanyira iyi link. Mutengo wayo parizvino uri pa9,98 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ipa kubata kweutsva uye runako kune yako Apple Watch
Iripi maneja maneja?
Apple Pay ichasvika muFinland neSweden gore risati rapera